Injabulo kwabesikole bethola umfaniswano ku Sivubela – Sivubela intuthuko Newspaper
By admin	 Last updated Jun 24, 2021 134
Ngesikhathi Sivubela Intuthuko sigubha inyanga yetsnha ngokunikela kubantwana
ISivubela Intuthuko ligubhe inyanga yentsha ngokunikela ngomfaniswano wesikole kulezo zingane ezingathathi entweni endaweni yaseNgonyameni eSkhwama High school ngaphansi kwesiqubulo esithi “Sibeka imfundo phambili”.
Kuzokhumbuleka ukuthi iSivubela Intuthuko liyiphephandaba elingathathi ndawo njengoba liphephandaba lomphakathi elilekelelwa kakhulu osomabhizinisi abafana noMkhucululi, Nkululeko, Sakhumnotho PTY LTD kanye ne-Ayathube PTY LTD ngokubeka izidingo zomphakathi.
Leli phephandaba kalingcini ngokubhala nje kuphela kodwa linezinhlelo zokusimamisa umphakathi njengokulwa nokubhebhetheka kwengculazi (HIV/AIDS), ukulwa noBubha (Poverty Alliviation) kanye nezinhlelo zokuletha ukuthula (Peace).
UMnu Linda Goge ongusekela kathishanhloko waseSikhwama ubonge Isivubela Intuthuko ngomnikelo ewenze esikoleni sabo ethi ukholwa ukuthi lokhu kuzokwenza ukusebenza kwabo kube lula. Uthe abafundi nabo sebezohambela phezulu babe nokuziqhenya ngoba bazobe sebefaniselana nabanye abafundi ngomfaniswano. “Lolu xhaso lusho kithina akasekho umfundi osezozenyeza. Ngokujwayelekile lezsi ngane ezihlwempu yizona ezibamba kangcono ezifundweni ngakho uma kukhona okuzikhinyabezayo njengokuswela umfaniswano liyehla izinga lokubamba kalula izifundo,” usho kanje.
UMnu Goge uthe nabo kukhona abakwenzayo esikoleni ngobuchwabalala ababemukela emnyangweni wezemfundo njengoba belungisa amakilasi. Uthe izandla bazivulile kuzona zonke izinhlaka ukwelula isandla ukuze isikole sabo sihlale siqhakazile njengoba neSivubela Intuthuko seyenzile ukuqhakazisa abafundi.
Umfundi onguSphamandla Gumede ofunda u-grade 11 ongomunye wabahlomule ngomfaniswano uthe uyajabula ngakwenzelwe yiSivubela Intuthuko. Uthe noma ebengezwa ehletshwa ngabanye abafundi kodwa mhlambe bebemhleba emakhosombeni. “Okwenzeke namhlanje kungijabulise kakhulu njengoba ithemba bese lingilahlekele lokuthola umfaniswano kodwa sekwenzekile ngentando kaNkulunkulu. Akekho osebenzayo ekhaya yingakho ngidonsa kanzima,” usho kanje.
UMhleli oMkhulu weSivubela Intuthuko uNKK Makhosi Mngoma ubonge ukuba yiphephandaba elifezekisa lokho elakuthembisa abantu baKwaZulu-Natal mhla lisungulwa lokubuyisela okuhle kubafundi balo. Waphinda wabonga kakhulu izinhlangano zomphakathi (NGO) , amakhansela kanye nezikole ngokuqhuba izinhlelo zentuthuko kubantu. Ucele iminyango ehlukahlukene kahulumeni ukwelula isandla ukuze umbono nezinjongo nezinhloso zeSivubela Intuthuko zibonakale kuqhubeke kusizakale nabanye abantu ngaphansi kohlelo lwephephandaba.
UMasipala waseThekwini nekhwelo kubabhali bezincwadi